I-Wholesale GQ-SN Flash Seeting Admixture - Liquid (Alkali-free) ifektri abakhiqizi | UGaoqiang
Ukuhlanganiswa Kwe-GQ-SN Flash Seeting - Liquid (Alkali-free)
I-GQ-SN uhlobo lwe-accelerator kakhonkolo wombuso wamanzi. Ingxenye eyinhloko ye-GQ-SN yi-sodium aluminate. Ukuhlanganiswa kusetshenziselwa ikakhulukazi ukhonkolo ofuthwayo; ingasheshisa inqubo yokuqina kokhonkolo kahle, futhi inezinzuzo zokuncipha kothuli, ukuqina okuphansi, ukusakazwa okuphezulu kwesikhathi eside
I-GQ-SN uhlobo lwe-accelerator kakhonkolo wombuso wamanzi. Ingxenye eyinhloko ye-GQ-SN yi-sodium aluminate. Ukuhlanganiswa kusetshenziselwa ikakhulukazi ukhonkolo ofuthwayo; ingasheshisa inqubo yokuqina kokhonkolo kahle, futhi inezinzuzo zokuncipha kothuli, ukuqina okuphansi, amandla amakhulu wesikhathi eside, njll.
Ukusheshisa ukuqina kokhonkolo kahle. Kungenza isikhathi sokusetha sokuqala sibe ngaphansi kwamaminithi ama-5 futhi isikhathi sokusetha sokugcina esingaphansi kwemizuzu engu-10.
2 Khulisa ngempumelelo amandla okuqala, futhi akunamthelela emandleni esikhathi eside.
3 Ukuqina okuphansi ekusetshenzisweni kwesilinganiso sikakhonkolo.
4 Ukunwebeka okuncane, kungathuthukisa ukwanda kwamanzi.
5 Kuthathe ukuzwela kwe-polycarboxylate water-reducer ezintweni zokusetshenziswa, ukusetshenziswa kwamanzi kanye isilinganiso.
Izinto zokwakha ezinomdlandla, ezinconyelwa ikakhulukazi ukwakhiwa kwamandla okuqinisa amandla okuqala, njengokufafaza udaka, ukhonkolo ofuthiziwe, ukufaka ukhonkolo, ukhonkolo wokufaka ukhonkolo, njll.
Imininingwane Yezobuchwepheshe / Izakhiwo Ezijwayelekile
Ubuningi / (g / cm3), 22 ℃
Okuqukethwe kwe-chloride / (%)
Okuqukethwe kwe-alkali / (%)
*Lezi zakhiwo ezingenhla azisho imininingwane yomkhiqizo.
Incomo Yohlelo Lokusebenza
Isikali: Umthamo onconyiwe ngu-6.0-8.0% ngesisindo sezinto ezibophayo. Umthamo osebenzayo kufanele ube ngokususelwa ohlotsheni lukasimende, izinga lokushisa kwemvelo, isilinganiso sosimende samanzi, ibanga lamandla, ubuchwepheshe bokwakha kanye nemfuneko yephrojekthi. Kunconywa ukuthi uvivinye ukusebenza usebenzisa izinto zokusetshenziswa esizeni.
Ukusetshenziswa: Faka izinto zokuxuba zesamente ku-injector, i-accelerator ingezwa embhobho. Usimende wamanzi isilinganiso sinconywe u-0.33-0.40 ngodaka, u-0.38-0.44 ngokhonkolo, nokuqinisekisa ukuthi udaka lokufafaza noma ukhonkolo hhayi ukugeleza, umbala omsulwa.
Iphakheji: 200kg / isigubhu, 1000kg / IBC noma ngesicelo.
Isitoreji: Kugcinwe endaweni yokugcina izimpahla engenawo umoya eyi-2-35 ℃ futhi ihlanganiswe kahle, ngaphandle kokuvulwa, impilo yeshalofu ingama-90 izinsuku. Ifanelekile ngaphambi kokusetshenziswa uma idlula impilo yeshalofu
Leli pheshana elezinkomba kuphela kodwa alisho ukuthi liphelele futhi alinaso isibopho. Sicela uthuthuke ukuze uvivinye i- ukusetshenziswa.
Langaphambilini Umenzeli Wamandla Okuqala we-GQ-210
Olandelayo: I-cellulose Ether HPMC yokuPlasta / Ukhonkolo / iGrout njengoMenzeli Wokugcina Amanzi
Umenzeli Wamandla Okuqala we-GQ-210
Umenzeli we-GQ-208 Compound Antifreeze
I-GQ-KG (L) / 01/02 Umenzeli Wokuxhuma Ikhebula
I-cellulose Ether HPMC yokuPlasta / Ukhonkolo / Gr ...